Xarunta Darasaadka Siyaasada Ee CPA Walaac Ka Muujiyay In Dib U Dhac Ku Yimaado Doorashooyinka Somaliland...
Wednesday September 12, 2018 - 03:37:43 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreebnews)-Bisha March 27, 2019 waa maalinta loo cayimay ama loo asteeyey inay Somaliland ka qabsoomaan doorashooyinka Golaha Deegaanka iyo Golaha Wakiilada oo isa-saaran. Muddadaas waxaa haatan ka dhiman wakhti ku siman lix bilood, hase ahaatee waxaa yaalla hawlo faro badan oo ay ahayd in xilli hore la sii qabto. Wakhtiga haatan hadhay ayaa cidhiidhi aad u weyn gelinaya in la qabto doorashooyinka Golaha Wakiilada iyo Deegaanka.
Halkan ka Akhriso Warbixinta Xafiiska La Socodka Arimaha Doorashada CPA oo Dhamaystiran:
Bisha March 27, 2019 waa maalinta loo cayimay ama loo asteeyey inay Somaliland ka qabsoomaan doorashooyinka golaha deegaanka iyo Golaha Wakiilada oo isa-saaran. Muddadaas waxaa haatan ka dhiman wakhti ku siman lix bilood, hase ahaatee waxaa yaalla hawlo faro badan
ay ahayd in xilli hore la sii qabto.Wakhtiga haatan hadhay ayaa cidhiidhi aad u weyn gelinaya in la qabto doorashooyinka Golaha Wakiilada iyo deegaanka.
Ka sokow wakhtiga kooban ee haatan hadhay, waxa sidoo kale jira oo caqabad ku ah in doorashooyinku xilligoodii ku dhacaa%, qodobo aad u badan oo haddii aan xal iyo go’aano laga gaadhin, inta sannadkan ka hadhay, ay keeni karayso in doorashooyinku ay markale dib u dhacaan wakhti kale.
Codaynta AftidaNatiijada Codaynta% oo Cod"Haa" Codadka Aqbalay1,148,94097.10%"Maya" Codadka Diiday34,3022.90%
14 April 2003 – Somaliland waxay gashay doorashadii ugu horraysay ee madaxtooyo, waxaana ku tartamay saddex musharax oo kala ahaa, Madaxweynihii xilligaas ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin, musharaxii Xisbiga Kulmiye Axmed Maxamed Siilaanyo iyo Musharaxii Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin ayaa doorashadaas ku guulaystay illaa 80 cod oo keliya inkasta oo markii dambe go’aankii maxkamadda sare uu noqday in Madaxweyne Rayaale ku guulaystay codad ka badan 200 oo cod. [2)
MusharaxaCodadka% oo CodDahir Riyale Kahin (UDUB)205,59542.08%Ahmed Mohamed Mohamud Silanyo (KULMIYE)205,51542.07%Faysal Ali Warabe (UCID)77,43315.85%
Xisbiga TartamayeyCodadka% oo CodKuraastaUDUB261,44939.00%33KULMIYE)228,32834.06%28UCID180,54526.93%21
2008/2009 Dhammaan gobollada Somaliland waxaa laga qabtay diiwaangelintii ugu horraysay ee codbixiyayaasha, diiwaangelintaas ayaa isugu jirtay in muwaadinka la siiyo kaadha dhalashada iyo kaadhka codbixinta. waxaana la diiwaangelinayey, dadweynaha ku nool magaalooyinka, tuulooyinka illaa miyiga, iyada oo goobkasta oo doorasho la
gaadhsiiyey gaadiid, shaqaalaha doorashada iyo agabka doorashada. In ku dhow 1.2 million oo codbixiye ayaa la diiwaangeliyey. 
MusharaxaCodadka% oo CodAhmed Mohamed Silanyo (KULMIYE)266,90649.59%Dahir Riyale Kahin (UDUB)178,88133.23%Faysal Ali Warabe (UCID)92,45917.18%
15 November 2012 waxaa Somaliland ka dhacay doorashadii golaha deegaanka ee Somaliland halkaas oo ay ku tartameen toddoba urur siyaasadeed iyo xisbiyadii siyaasadda
diiwaangashanaa, oo kala ahaa Rays, Umadda, Xaqsoor, Dalsan, Wadani, UCID iyo Kulmiye. Ka sokow in dadweynuhu ay u codaynayeen mudanayaasha golaha deegaanka ee metelaya, haddana waxaa barbar socotay in saddexda urur ee ugu codka badani inay noqon doonaan Xisbiyo Qaran. Doorashadaas waxaa ku guulaystay inay xisbiyo qaran noqdaan saddexda xisbi ee kala ah Waddani, Kulmiye iyo UCID. Doorashadaas waxaa codkooda dhiibtay illaa 820,000 oo codbixiye, waxaana ka qayb galay 2,368 musharax oo u tartamayey 379 kursi oo gole deegaan.
April - September 2017 ka dib diiwaangelintii codbixiyayaasha ee ay qabteen guddida doorashadu, waxay kala hufeen xogtii diiwaangelinta, iyaga oo daabacay kaadhadhkii codbixinta. Guddida Doorashada ayaa markaas qaybiyey kaadhadhka codbixinta doorashada iyaga oo geeyey dhammaan goobihii codbixinta ee ay hore uga diiwaangeliyeen dadka.  Tirade guud ee qaadatay kaadhadhka codbixinta ayaa ahaa
704,089 codbixiye, kuwaas oo ka qayb galay doorashadii madaxnimada ee Somaliland ka qabsoontay bishii November 2017. 
13 November 2017 Somaliland waxay qabatay doorashadii madaxtinimada ee saddexaad
ay ku tartameen Musharaxa Xisbiga Talada hayey ee Kulmiye Muse Biixi Cabdi, Musharax ka socday Xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirro, iyo Musharaxa Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe. Natiijada Doorashada madaxtinimada ayuu ku guulaystay Muuse Biixi Cabdi inuu noqdo madaxweynihii shanaad ee ay Somaliland yeelato. Doorashada ayaa ka qabsoontay 1638 goobood oo ka mida 1642 goobdoorasho oo la filayey in doorashadu ka dhacdo. Xisbiga Kulmiye ayaa helay 305,909 oo cod oo u dhiganta 55.1% codadkii la dhiibtay, halka Xisbiga Waddani uu helay 226,092 oo cod oo u dhiganta 40.73%, Xisbiga UCID ayaa isna helay 23,141 oo cod oo u dhiganta 4.17% 
1.XEERKA CUSUB EE DOORASHADA
Saami Qaybsiga Kuraasta: Golaha Wakiiladu wuxuu ka kooban yahay 82 xubnood oo sida dastuurku dhigayo ay tahay in laga soo kala doorto gobolada Somaliland ee lixda ah. Waxa muran siyaasadeed iyo sharci ka jiraa saamiga gobol waliba ka helayo 82 ka kursi iyada oo nidaamkii lagu qaybiyay 2005 uu ahaa mid ku meel gaadh ah oo hal mar keliya la isticmaalay. Nidaamkaas oo laga so dheegtay doorashadii 1960 ka dhacday Somaliland sidii degmooyinkii lixda aha ee waagaas
jiray ay u kala lahaayeen 33 ka kursi ee uu a koobnaa golihii sharci dejinta ee Maxmiyaddii Ingirsiiska. Haatan lixda gobol ee Somaliland ayaa kuraasta baarlamaanka u kala hela sidan:
Waxaa jira cabashooyin kala duwan oo laga muujinayo habka loo qaybiyey kuraasta Golaha Wakiillada, waana mid ka mida caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan doorashada Golaha Wakiillada. Saami-qaybsiga kuraasta baarlamaanka
haatan uu golaha wakiilladu ku fadhiyaan, waxaa si adag uga soo horjeeda waxgaradka iyo xildhibaano ka soo kala jeeda gobollada bariga Somaliland iyo gobolka Awdal, oo iyagu raba in dib u eegis lagu sameeyo saami-qaybsiga kuraasta. Ilaa hada ma jirto is faham laga gaadhay qaabka loo maaraynayo arinkan. Waxana cad in Golaha dhexdiisa ay ka abuuri doonto muran xooggan.
Qoondada Haweenka: Golaha Wasiiradu waxay soo jeediyeen in haweenka ka qaybgelaya doorashooyinka Golaha Wakiillada loo xidho qoondo gaar ah oo gaadhaysa 22% saamiga guud ee kuraasta Golaha. Hase ahaatee qodobada la
xidhiidha qoondada haweenka si cad looma faahfaahin habka farsamo ee ay ku imanayaan.  Golaha Wakiiladu hore ayuu u diiday soo jeedin tan la mid ah.
Ka hor inta aan la gelin doorashooyinka soo socda, waa in dib loo furaa diiwaangelinta codbixiyayaasha, si dadweynaha aan hore fursadda ugu helin inay is-diiwaangeliyaan, ay haatan fursaddaas uga faa’iidaystaan, sidoo kalena dadka qaangaadhay intii u dhexeysay diiwaangelintii hore iyo haatan, inay fursad u helaan inay isdiiwaangeliyaan. Haddaba hawsha diiwaangelintu waxay u baahan tahay dhaqaale, qorshe iyo is-faham u dhexeeya dhinacyada ku lug leh hawlaha doorashada. Haatan waxaa muuqata, inaan la hayn lacag diyaar ah oo lagu qabto kaabista diiwaangelinta codbixiyayaasha, isla markaana loo baahan yahay isfaham dhex mara dhinacyada ay khusayso doorashada oo isna haatan aan muuqanin
XISBIGA UCID IYO HAWLAHA DOORASHADA September 05, 2018 - Xisbiga UCID ayaa ku baaqay
Deegaanka Ceelaf-weyn waxaa ka dhacay dagaallo soo noqnoqday oo u dhexeeyey laba beelood
halkaas wada dega, hase ahaatee dedaal dheer oo ay hoggaaminaysay Xukuumadda Somaliland, gaar ahaan madaxweyne ku xigeenka iyo Wax-garadka kale ee Somaliland oo ay hormuud u yihiin Culimada iyo Madaxda dhaqanka, waxay heshiis dhex dhigeen labadii beelood ee ku dagaalamayey wakhtiga kala duwan Ceelafweyn iyo hareereheeda. Intii coladahaasi socdeen, waxaa ciidamada Somaliland ka goostay laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka Milateriga ee Somaliland oo ay wehelinayaan ciidamo iyo maleeshiyo kale oo deegaanka ah.
Bishii May 10, 2018 waxaa baraha bulshada la soo dhigay muuqaal -lagu duubay mobile, - kaas
muujiyey sarkaal ka tirsan ciidanka Qaranka ee Somaliland oo ku sugan gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ceelaf-weyn oo la hadlaya saraakiil kale oo ciidankiisa ah. Sarkaalkaas oo lagu magcaabo Siciid Cawil Caarre, ayaa ahaa abaanduulaha guutada 3aad ee ciidanka Qaranka ee jooga gobolka Sanaag, wuxuuna muujinayey cabasho, sida laga dhex arkayey muuqaalka . Sarkaal Caarre ayaa xilligaas wixii ka dambeeyey ka goostay ciidamada Somaliland, wuxuuna aasaasay jabhad haatan saldhig laga siiyey degmada Qardho ee Puntland. August 11, 2018 Sarkaal kale oo ka tirsan ciidanka Qaranka ee Somaliland oo lagu magcaabo Gamaal Baaxad ayaa isna u goostay dhinaca Jabhadda Caarre ee fadhigeedu yahay agagaarka degmada Qardho. 
Hase ahaatee September 06, 2018, waxaa warbaahinta la hadlay Sarreeye Guuto Saleebaan Barre Xasan oo ah abaanduulaha labaad ee Ciidanka Qaranka iyo Sareeye Guuto Faarax Maxamed Mire Madaxa Hawlgelinta Ciidanka qaranka, waxayna meesha ka saareen doodda Col. Caarre ee la xidhiidha caddaalad darrada. Sarreeye Guuto Saleebaan Barre ayaa ku dooday "… isaga [Col. Caarre] ayaa caddaalad darro loo sameeyey ee caddaalad darro lagu sameeyey ma jirto…” waxayna ka hadleen inuu Col. Caarre uu marar badan ku kacay falal ka baxsan anshaxa ciidamada intii uu ahaa sarkaalka ka tirsan ciidamada. 